June 2012 ~ Rohingya Blogger
Burma News, Rohingya News
A house in the Arakan capital of Sittwe is engulfed by flames during the recent violence.
Editor’s Note: Below the author shares her experience, observations and opinion regarding the outbreak of violence in Burma’s Arakan State (also called Rakhine State). The recent fighting has cost the lives of dozens of people and forced tens of thousands to flee.
By Sandi Aung
Recent images of fighting in Burma’s Arakan State, the home of my ancestors, has deeply saddened me. I am struck by the loss of life, the violence and the livelihoods destroyed. But, I am also disturbed by how little the social and economic conditions have changed.
I still remember the faces of people, like the Rakhine and Rohingya, that surrounded me when I was5years old living in the state and, later, when I returned to visit asacollege student. The conditions captured in the recent images—the boats, villages, buildings and streets — sadly, look the same as when I was there more than 20 years ago.
While growing up in Sittwe, the capital of Arakan State, I remember going to the neighborhood market with my grandmother and buying grocery items from both Rakhine and Rohingya merchants. The Rohingya were around me in my daily life, serving as hired hands for businesses, selling fish and vegetables at the market and selling snacks and traditional medicines. I would see Rohingya women walking down the streets wearing longyi (traditional woman’s wear in Burma) with scarves around their necks and faces representing their Muslim faith.
Asachild, I was always told that Muslims, the Rohingya, were immigrants from Bangladesh. Isolated incidents of violence between individuals from both sides would happen from time to time — sometimes escalating into riots. Growing up, I was indifferent to the problem.
I hadachance to visit Bangladesh back in the early 2000s, and met some Rohingya women who were living outside of camps (I wasn’t able to visit the camps themselves) in utter poverty. They could barely speak Bengali or other tribal dialects used in Bangladesh. Their stories were shared through the hard-work of translation:
left with several children because husband never came back (not knowing what had happened to him), makingaliving by breaking big cement pieces at the construction sites, selling vegetables or selling any creatures that can be dug out from the mud, to feed themselves.
They said they wanted to go home, pointing toward Arakan state.
I thought to myself that, if they had indeed just crossed the border to live in Arakan state, shouldn’t they be feeling comfortable because they were back at home, safe and sound inaMuslim community? Why go back to the territory dominated by Buddhists who have discriminated against them for centuries?
Differences along ethnic and racial lines are common across the world, but it is wrong and unacceptable for people to use these differences as justification for killing, looting, and other forms of abuses. Even worse, is tolerating such behaviors for years.
So what spurred the recent outbreak of violence?
To me, it wasaperfect storm in the making for years — the absence of the rule of law, the lack of civic education and severely limited economic opportunities. All of this has been coupled with the strain of living underarepressive regime for decades. While I appreciate the international community’s concerns, I don’t welcome finger-pointing or blaming one group over another. Yes, individuals from both sides who committed the crimes should be brought to justice. But, labeling the crisis as “Buddhists” vs. “Muslims” or “Rakhine” vs. “Rohingya” simply exacerbates the divide. The leaders of both sides, with access to international media, have called out loudly for their own causes. They are sitting in their comfortable homes while ordinary people were out on the streets fleeing from violence, possibly triggered by their words.
It’s time for everyone to takeastep back. It’s too bad that we have left this wound unhealed for this long and whatashame foracountry known to have fought so hard for democracy! But, here isachance: let’s show the international community that we belong toademocratic world by treating everyone with respect regardless of their ethnicity, color, religion or legal status. Let’s keep the debate in the peaceful forums represented by all parties throughademocratic process and by keeping an open mind.
Yes, it will beadifficult emotional process for all of us, but it’s the right thing to do and necessary for the country to move forward.
Sandi isanative of Burma andagraduate of University of Yangon and University of Notre Dame. She is an educator and currently lives in Conway, Arkansas.
၂၈.၆.၁၂စစ်တွေမြို့- မြို့ မဈေးကြီး ကို အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကနေ မိန်းကလေး ၃ ယောက်က မနက် ၁၀ ၃၀ မှာသွားတယ်။ အဲ့ဒီမိန်းခလေး ၃ဦးရဲ့ နာမည်မှာ ရေဟာနာ ၂၈နှစ် အဘ အဘူဘကရ်၊ ဖီရိုဇာ ၃၀နှစ် အဗ်ဒူလ် ဂနီ၊ မူနီ ၃၃နှစ် အဘ စပွတ်သာ------
၁. မျက်ခွန်လန်သွားတယ် ခေါင်းကွဲတယ်။
၂. မျက်ခွန်လန်သွားတယ် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဒဏ်ရာများစွာရရှိ။
၃. ကိုယ်ဝန် ၄လရှိတယ်။ အရမ်းအသည်းသန်း ဖြစ်နေတယ်. မိန်းခလေး၃ဦးထဲမှာ ဒဏ်ရာအများဆုံးရထားသူဖြစ်တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်တခုလုံးမှာ ဒဏ်ရာတွေ ရစရာမရှိအောင်ရထားတယ်။ ကိုယ်ဝန်ကို ခြေထောက်နဲ့ ကန်တယ် တက်နှင်းတယ်လို့ သိရတယ်။
အဲ့မိန်းခလေး ၃ယောက်က ဈေးဝယ်ပီးတော့ ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာ လမ်းမှကြီး မြို့ တော်ခန်းမအရှေ့ ကနေ ဆိုင်ကယ် Taxi နဲ့ အသင့်စောင့်နေတဲ့ ရခိုင်ဗမာ အမျိုးသား ၇ လောက်ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်. အဲ့ဒီ၇ယောက်က မိန်းခလေး ၃ရောက်ကို ဝိုင်းဖမ်းပီးတော့ မော်တော် Taxi ပေါ်မှာ အတင်းဆွဲတင်ပီးတော့ မြို့ မဈေးကြီးရဲ့ ဘေးမှာ အသစ်ဆောက်ထားတဲ့ ဈေးသစ်ရဲ့ နောက်ဖက်တွင် လူရှင်းတဲ့ နေရာ၁ခုသို့ ခေါ်ဆောင်သွားပီနောက် အဆင်သင့်စောင့်နေတဲ့ ရခိုင်ဗမာ လူဦးရေ ၃၀ လောက်ရှိပါတယ်. အဲ့ဒီ၃၀ နှင့်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ ၇ ယောက်က ပေါင်းပီးတော့ အလွန်မတန်မှရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နက်ခဲ့ပီးတော့ လူမဆန်လောက်အောင် စိတ်တိုင်းကျ ရိုက်နက်ခဲ့ပီး နောက်ပိုင်းမှာ အဲ့ဒီနေရာမှာတင်ထားခဲ့တယ်... ဒဏ်ရာများစွာရတဲ့ မွစ်လင်မ် မိန်းခလေး ၃ရောက်ရှိက သတင်းရခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီကိစ္စဖြစ်ပီးတော့ မိနစ်၃၀ သို့၄၅ မိနစ်လောက်ကြာပီးတဲ့နောက်မှာ နောက်ထက်မွစ်စလင်မ်မိန်းခလေး၁ယောက်ကို ဒုက္ခပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ၁ယောက်ရဲ့ နာမည်မှာ နူးရ် အာအီရှာ ဖြစ်ပီး အသက် ၂၅ အဘ အမည် ဂူးရာမီယာ.
ဒီမိန်းခလေးမှာလည်း ဈေးဝယ်ပီးပြန်လာနေတဲ့အချိန်မှာ ဥဓမ ပန်းခြံရဲ့ ဘေးမှာ လမ်း၁လမ်းရှိပီး အဲ့ဒီလမ်းကနေ မော်တော် Taxi နဲ့ အတင်းအတမ ဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ ခေါ်သွားတဲ့နေရာက တော့ မင်းဘကြီးလမ်း ကျောင်းတန်းလမ်းရပ်ကွက် ရွာမကွဆုံ ဆိုတဲ့နေရာကို ခေါ်ဆောင်သွားပီးတော့ ရခိုင်ဗမာ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများက ပေါင်းပီးတော့ ရိုက်နှပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်. ဒဏ်ရာ ကတော့ ခေါင်းကွဲတယ် မျက်နှာလုံးဝ ပျက်ဆီးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့လိုရိုက်နှပ်ပီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ထက်ပီးတော့ မြို့ မဈေးသစ်ရဲ့ နောက်ကို ပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားပီးနောက်မှာ ထက်ပီးရိုက်နှပ်ခဲ့တဲ့အပြင် ပြစ်ထားခဲ့တယ်လို့ သိရတယ်.
အခုလိုရိုက်နက်ခံရတဲ့ မွစ်လင်မ် အမျုိးသမီးလေးရောက် လုံးကို ၁နေရာထဲမှာ ပြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်. အဲ့လိုပြစ်ထားပီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တွေမြို့ ရဲ့ လုံထိန်းတွေ နှင့် ရဲတွေက မြင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်..သူတို့ တွေက ထို မိန်းခလေး ၄ယောက်ကို ၂၈ ၆ ၁၂ နေ့ ခင်းအချိန်တွင် စစ်တွေရုံကြီးကို ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်အခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အချိန်မှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ဆရာဝန် ခင်မေထွေက ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုရင် ဒီမွစ်လင်မ် အမျိုးသမီး ၄ယောက်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၁ခုလို့ မှာ လက်တွေ တုတ်တွေနဲ့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်နက်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အရေးကြီး အဓိက ဒီအမျိုးသမီးလေးယောက်ရဲ့ ဦးခေါင်းနဲ့ မျက်နှာကို အဓိကထားပီးတော့ ရက်ရက်စက်စက်ရိုက်နှပ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်. ကိုယ်ဝန်ရှိနေတဲ့ အမျိုးသမီးကိုကျတော့ ဗိုက်ကိုခြေထောက်နဲ့ ကန်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီမွစ်လင်မ် အမျိုးသမီး ၄ယောက်ထဲမှာ အခြေအနေအရမ်းဆိုးနေတဲ့သူကတော့ ကိုယ်ဝန်သယ်အမျိုးသမီးဖြစ်ပီး ယခုအချိန်ထိ ဆိုးရိမ်းနေကတုန်းဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်. ကိုယ်ဝန်သယ်အမျိုးသမီးအတွက်ရော ကိုယ်ဝန်တွင်းရှိသော ခလေး အတွက်ပါ အလွန်အင်မတန်ဆိုးရိမ်းနေရကြောင်းသိရပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ သေသေချာချာဆေးကုသမူ မရရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အခုလို ဆေးကုသမူကောင်းမွန်စွာ မရတဲ့အပြင် ၂၉.၆.၁၂ ညနေ ၆နာရီမှာ ရဲတွေက ဒီမွစ်လင်မ် အမျိုးသမီး ၄ယောက်ကို ဆေးရုံးကနေ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ကို ပြန်ပို့ ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုဒီ မွစ်စလင်အမျိုးသမီး ၄ယောက်ကို ရိုက်နှပ်တဲ့သူတွေကတော့ အုပ်စုနဲ့ လိုက်ပီးတော့ လုပ်နေတဲ့လို့ သိရပါတယ်။ ဒီအုပ်စု ထဲမှာ ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်၁ယောက်ရဲ့ နာမည်နှင့် အိမ်လိပ်စာကို အတည့်အကျရထားတဲ့အပြင် ထိုမိန်းခလေးတွေကလဲ တွေ့ ခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ နာမည် (ကျော်သန်းမောင် ၃၅နှစ် အဘ ဦးမောင်နီအောင်) အိမ်လိပ်စာ - ဇွဲညီနောင်သံမဏီဆိုင် မင်းဘကြီးလမ်း ရွာမခွက်ဆုံးရှေ့ လို့ သိရပါတယ်။ ဒီထက်တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် သိန်းမဟာအိမ်ရဲ့ ဘေးလို့ သိရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပီး အတိအကျသိရတဲ့ဟာကတော့ ဒီကျော်သန်းမောင်ဆိုသူက ရခိုင် တိုးတက်ရေးပါတီဝင် တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ကျောက်တော်မြို့ နယ်ရှိ မွစ်စလင်(မ်)ရွာများ အခြေအနေ......
၁။ မွစ်စလင် ရွာများမှ မွစ်စလင်များ မိမိတို့ ၏ ဈေးဆိုင်များရှိသော၊ ကျောက်တော်မြို့ပေါ်တွင် ရှိသော ဈေးဆိုင်များကို ဖွင့်ပြီးရောင်းချခွင့်မပြုခြင်း ၄င်းဆိုင်ရှိပစ္စည်းများကိုရခိုင်တိုးတတ်ရေးပါတီက ထုတ်မပေးရန် ၊ ၄င်း ဆိုင်ခန်းရှိ ပစ္စည်းများကို ၄င်းရခိုင်တိုးတတ်ရေးပါတီက သိမ်းပိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျောက်တော်မြို့ ပေါ်ရှိ ၇ခိုင်မောခ် များနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုက်ခြင်း။
ယခုမွစ်စလင်များ စားရေး၊သောက်ရေး များ အလွန်ဒုက္ခရောက်နေခြင်း။ရွာအပြင်သို့ သွားလာခြင်းကို ခွင့် မပြုခြင်း၊ပိတ်ပင်ထားခြင်း။မြို့ ပေါ် နှင့် ဈေးများ ကို သွားရောက် ၀ယ်ယူပိုင်ခွင့် ကို မပြုခြင်း။ထို့ နောက် မြို့ ပေါ်သို့ သွားရောက် လျှင် ရခိုင်မောခ်များ က အကြမ်းဖက်ခြင်း။ရိုက်နပ်ခြင်း၊ဓားနှင့်ခုတ်ခြင်း နှင့် လုရက်ခြင်း များပြုလုပ်နေခြင်း တို့ ကြောင့် ကျောက်တော် မြို့ နယ်ရှိမွစ်စလင် များ စိတ်သောက ရောက်လျှက်ရှိနေပါသည်။
၂။ ၁၅ရက်နေ့၆လပိုင်း ၂၀၁၂ခုနှစ် မြန်မာစိတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ် တွင် မြို့ ပေါ်သို့ဆိုက္ကား အငှားယာဉ် နှင့်တတ်သွားသူ လူ(၄) ယောက်ကို ရိုက်ခြင်း၊ဓားနှင့်ခုတ်ခြင်း များပြုလုပ်ပြီး၊ရခိုင်များနှင့်ရဲ များက ၄င်း တို့ ကို အတင်း ဓာတ်ဆီ ပုလင်း များကို ကိုင်ထားစေပြီး၊ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊နောက်ပြီး မင်းတို့မီးရှို့ ရန် ကြံစည်ခြင်းဆိုပြီး ကတိခံလက်မှတ် ရေးထိုးခိုင်းပါတယ်။
နောက်ပြီး ၄င်းတို့(၄)ဦးမှာ အသည်းအသန်ဖြစ်နေပါသည်။၁၆.၆.၂၀၁၂နေ့တွင် အသက် (၂၂)ရှိ မိန်းကလေး တစ်ဦးက မြို့ ပေါ်သို့တက်သွားရာ အိမ်ပြန် လာခြင်း မရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
၃။ ကျောက်တော်မြို့ နားရှိ မွစ်စလင်ရွာများ နှင့် နယ် မှာ ရှိနေသော မွစ်စလင် ရွာများ မှ မွစ်စလင်များ မြို့ ပေါ် တက်ပြီး ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း၊သွားလာနိုင်ခြင်း များ ရှိ၊မရှိ သည်မှာ ယခုရက်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ရှိနေပါပြီ မိမိတို့ ရွာများမှာလည်း စားနှပ်ရိက္ခာများပြတ်လတ်နေပါသည်။ များမကြာမည် ကျောက်တော် မြို့ နားရှိမွစ်စလင်များ၊နယ်များတွင်ရှိသော မွစ်စလင်များ ၏ စားဝတ်နေရေးများ
အလွန် ဒုက္ခရောက်နေပါသည်။ကျောက်တော်မြို့ ပေါ်ရှိ ရခိုင်များကို စစ်တွေ မှ ၄င်း မြောက်ဦး၊မင်းပြား များမှ ပုံမှန် ကားများဖြင့် စားနှပ်ရိက္ခာများသို့ပေးနေကြောင်း သိရှိရပါသည်။၄င်းပြသာာနာများကို ကြီးအောင် နှင့် ကျယ်အောင် လုပ်ဆောင် ပေးလျှက်ရှိသော အဓိက အုပ်စုမှာ ရခိုင်တိုးတက်ရေးပါတီဖြစ်ကြောင်း အတိအကျ သိရှိရပါသည်။၄င်းပါတီက မလုပ်ရင် ဒီပြသာာနာဟာ
ဒီလောက် ထိ မကြာဘူးလို့ ကျောက်တော်ရှိမွစ်စလင် အများစုက ယုံကြည့်ထားပါသည်။
၁။ မင်းပြားမြို့ နယ်တွင်ရှိသော မွစ်စလင်များ မြို့ ပေါ်တက်ပြီးဘာပစ္စည်းမှ၊ဘာစားနှပ်ရိက္ခာ မှသွားဝယ်လို့ မရပါ။မြို့ ပေါ်တက်ရင်၊ရခိုင်တွေကရိုက်လျှက်ရှိပါသည်။မြို့ ပေါ်ကို သူ တို့ တက်ပြီး ၀ယ်လို့ မရရင်အလွန်ဒုက္ခရောက်မှာပါ။နောက်ပြီး ၂၉.၆.၂၀၁၂ နေ့ လည်တွင် မိန်းမတစ်ယော် ချောင်းနားတွင် အ၀တ်သွားလျှော်ရာ ရခိုင် မောခ် (၅)ယောက်က လာပြီး အသင့်ပါလာသော တုတ်လှံများဖြင့် ရိုက်လိုက်ရာ
သေဆုံးသွားပါသည်။မြို့ နှင့်၎င်းရွာ၏ အကွာအဝေးမှာ ၃ မိုင်ရှိပြီး ရဲများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများကလည်း ဘာတစ်ခု မှ မလုပ်ပေးဘဲ နဲ့လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေပါတယ်။သတ်သွားတဲ့ လူတွေ ကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ရှာဖွေခြင်းများလည်းမရှိပါဟုမင်းပြားမှဖုန်းနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ ခြင်း ဖြင့် သိရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Source : AKB Internal Reporter
ပါကစ္စတန် အဓိကမြို့ကြီးများ အားလုံးလိုလိုတွင် ယနေ့ ဇွန်လ ၃၀ ရက် သောကြာနေ့ ၀တ်ပြုမှုအပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အပြစ်မဲ့ မွတ်စလင်မ်များ အစုလိုက်အသတ်ခံရမှု အပေါ် စုပေါင်းဆွေးနွေးပွဲများ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများ ကို့ ခေါင်းဆောင် ဆယသ် မူနာဝါ ဟစန်၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ ပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။ နိုင်ငံအတွင်း မွတ်စလင်မ်များအား မျိုးဖြုတ် သတ်ဖြတ်မူအား ကြူးလွန်ခွင့်ပြုနေသော အကြမ်းဖက်သမားများ၏ရန်မှ အကူအညီမဲ့နေသော မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ မွတ်စလင်မ်များ အား အကာအကွယ်ပေးရန် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၊ OIC နှင့် ကမ္ဘာတ၀ှမ်းမှ..... အာရုံစိုက်ခံရရေးအတွက် အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲအားပြုလုပ်ရန် နိူးဆော်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆန္ဒပြပွဲတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများက လွန်ခဲ့သော ညများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တစ်ခုတွင် ရာပေါင်းများစွာသောမွတ်စလင်မ်များ အစုလိုက်အသတ်ခံခဲ့ရသည့် အာရကန်ရှိမွတ်စလင်မ်များနှင့် တစ်သားတည်းရှိကြောင်း ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒသဘောထားကို ထုတ်ဖေါ်ပြသခဲ့ကြပါသည်။
ဖိနှိပ်ခံရသော အာရကန်မှ မွတ်စလင်မ်များ အကူအညီပေးရန် မွတ်စလင်အုပ်ချုပ်သူများအား နိုးထကြရန် သာသနာ့ပညာရှင်များနှင့် တရားဟောဆရာများက တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။
မန်ဆူးပလီတွင် သောကြာနေ့ ဟောကြားမူ အတွင်း ဆယသ် မူနာဝါ ဟစန်က ဒီလို အာရကန်ကမွတ်စလင်မ်တွေ အခုလိုသွေးထွက် သံယိုမူတွေ ဖြစ်တာကို အကယ်၍သာ OIC အနေနဲ့ ရှင်သန်မူရှိနေပြီး မွတ်စလင်မ်အုပ်ချုပ်သူတွေ အနေနဲ့ လေးစားခံထိုက်တဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲနဲလေး ကျန်နေအုံးမယ်ဆိုယင် သူတို့ ရပ်တန့်သွားအောင် လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ လဲ OIC နဲ့ မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံတွေက အုပ်ချုပ်သူတွေကို ဝေဖန်ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး သူက ဒါကာ အစိုးရအနေနဲ့ လှေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်ဖက်ကို ဖြတ်ပြီး အသက်စွန့်ပြေးလာရတဲ့ သူတွေကို ကူညီရမဲ့ အစား နယ်စပ်ကို ပိတ်ထားတဲ့ အပြင် အဲဒီထွက်ပြေးလာတဲ့ မြန်မာပြည်က မွတ်စလင်မ်တွေအပေါ် လုပ်ကြံစွပ်စွဲမှုတွေ မှားယွင်းစွာလုပ်ခဲ့တဲ့ ဘင်္ဂလားဒေရှ့် အာဏာပိုင်တွေကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြောင်းလည်း လာဟိုက ထုတ်ဝေသည့် သတင်းများအရ သိရှိရပါသည်။ Source : Myanmar Muslim .Net
စစ်တွေမြို့မဈေးတွင် မွတ်စလင်ဆိုင်ခန်းများအား အကြောင်းပြချက်မဲ့ သိမ်းယူနေ
စစ်တွေမြို့မဈေးရှိ မွတ်စလင်မ်ပိုင် ဆိုင်ခန်းများရှိ ပစ္စည်းများပြန်လည်သယ်ယူနိုင်ရန် အာဏာပိုင်များက ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး ပစ္စည်းများသယ်ယူပြီးပါက ဆိုင်ခန်းသော့များကို အာဏာပိုင်များကသိမ်းယူထားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။
ဒီကိစ္စဟာ မွတ်စလင်တွေ ဒီဈေးမှာ ဘယ်တော့မှ ပြန်ဖွင့်ခွင့်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလားလို့ စိုးရိမ်နေရကြောင်း သက်ကယ်ပြင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ရောက်ရှိနေသူ ရခိုင်မွတ်စလင်မ်တစ်ဦးက myanmarmuslim.net ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့က ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။ ပြန်ရရင် ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်စီးပွားရေးကိုယ်လုပ်စားလို့ ...
ရသေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စိုးရိမ်တာက ကျွန်တော်တို့ ဆိုင်ခန်းတွေ သိမ်းခံလိုက်ရတာလား။ အခြေအနေတည်ငြိမ်သွားရ ပြန်ရမှာလားဆိုတာကို မျှော်လင့်နေတာ”လို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ရခိုင်ဒေသခံတစ်ဦးက ဆက်လက်ပြောကြားသွားပါတယ်။
စစ်တွေမြို့မဈေးမှာ မွတ်စလင်မ်ဆိုင်ခန်း အများအပြားရှိပြီး ဈေးကို မကြာမီရက်ပိုင်း အတွင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ-ရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခအတွင်း ဆိုင်ခန်းသော့ ပျောက်ဆုံးသူဖြစ်ပါက သော့ဖျက်ခွင့်ပေးကာ ပစ္စည်းများသယ်ယူခွင့်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ ယခုကဲ့သို့ မြို့မဈေးမှ ပစ္စည်းများပြောင်းရွှေ့ပေးနေရတဲ့ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေဟာ မွတ်စလင်မ်တွေဖြစ်ပြီး ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုင်ခန်းပိုင်ရှင်တွေကတော့ ဆိုင်ခန်းအတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ သယ်ယူရန်မလိုအပ်ဘူးလို့ ဒေသခံ တစ်ဦးရဲ့ ပြောကြားချက်အရ သိရပါတယ်။
ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ- ရိုဟင်ဂျာပဋိပက္ခအစလောက်မှာပဲ ရခိုင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်က ရခိုင်အိမ်တွေပြန်ရရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အစ္စရေးလိုဖြစ်စေ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း venus ဂျာနယ်နှင့် အင်တာဗျူးတွင် ပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်က လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် သံဃာအချို့က ရိုဟင်ဂျာများကို ရှိရင်းစွဲနေရာ များကနေ မြို့နဲ့ဝေးရာနေရာကိုပို့ပြီး သီးခြားခွဲထားဖို့၊ ရခိုင်နဲ့ ရိုဟင်ဂျာတို့ကြား တွင် စစ်တပ်ထားရှိဖို့ သမ္မတထံတောင်းဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်။ မွတ်စလင်မ် ဆိုင်ခန်းများမှ ပစ္စည်းများ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတဲ့ ယခုဖြစ်စဉ်ဟာ အဆိုပါတောင်း ဆိုချက်များ အတိုင်း အာဏာပိုင်များက ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတင်းသမား အချို့က သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြတာ ကြားသိရပါတယ်။ SK (MMM)Source : myanmarmuslim.net
နိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စု၊ နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသား ကိစ္စ (၂)
နိုင်ငံ နယ်နမိတ်တစ်ခု ပီပီပြင်ပြင် တည်ရှိ၍ ထိုနယ်နမိတ်ကို ရေးဆွဲသတ်မှတ်စဉ် နိုင်ငံနယ်နမိတ်အတွက် မျိုးစဉ် မျိုးဆက် နေထိုင်ခဲ့သော လူသား ထိုနိုင်ငံ၏ ဥပဒေရိပ်အောက်မှ နိုင်ငံသား အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရမည်။ နိုင်ငံတိုင်းတွင်၊ နိုင်ငံနယ်နမိတ် သတ်မှတ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှ ၀င်ရောက်လာသူနှင့် နိုင်ငံ နယ်နမိတ် သတ်မှတ် လိုက်စဉ် နိုင်ငံအတွင်း၌ ရှိနေသူ ဟူ၍ ရှိသည်။ နိုင်ငံအတွင်း ရှိနေသူသည်- ထိုနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအောက်မှ လူသား ဖြစ်၍- နိုင်ငံအပြင်ပသို့ ရောက်သွားသော သူများမှာ သက်ဆိုင်ရာ အချုပ်အခြာပိုင်သည့် နိုင်ငံ၏ ဥပဒေအောက်မှ လူသားများဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် ချွင်းချက် အခြေအနေတစ်ရပ်ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ယူစဉ်တွင် နိုင်ငံနယ်နမိတ် အား သတ်မှတ်စဉ်တွင် သီဘောမင်း၏ မိသားစု အပါအ၀င် အချို့သော မိသားစုများသည် နိုင်ငံပြင်ပတွင် ရှိနေ သည်။ ထိုမိသားစုမျိုးထဲမှ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ်ခံယူလိုသူ တစ်ချို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လာ၍ နိုင်ငံသား ခံယူ လိုလျှင် ခွင့်ပြုပေးနိုင်သည်။ အလားတူ နိုင်ငံခြားမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ လာရောက်နေထိုင်သူ ဥပမာ အင်္ဂလိပ်ခေတ် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဥရောပလူမျိုးများ၊ အိန္ဒိယ လူမျိုးများ၊ တရုတ် လူမျိုးများအား သူတို့၏ စိတ်ဆန္ဒအလျှောက် မိမိတို့၏ ဇာတိနိုင်ငံသို့ ပြန်လိုက ပြန်နိုင်သည်၊ ဆက် လက်နေထိုင်လိုက နေထိုင်နိုင်သည် ဟူသည့် အခွင့်အရေးကို ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူတို့နှင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသူ တစ်ဦးဦး သွေးနှော ကပြား ဖြစ်နေသူများကို နိုင်ငံသား ပေးကို ပေးရပေမည်။ ထိုသို့သော အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ နိုင်ငံတိုင်းတွင် ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသား၊ တိုင်းရင်းသား ဟူ၍ အမျိုး အစား သုံးမျိုး သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် တိုင်းပြည်၏ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုစုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျမ္မရေး- ဆောင်ရွက်ပိုင် ခွင့်၊ ခံစားနိုင်ခွင့်များ၌ တန်းတူညီမျှ ဖြစ်စေရပေမည်။ သို့သော် (တိုင်းတစ်ပါး၌ မွေးပြီး) နိုင်ငံသား ဖြစ်လာသူ အား တိုင်းပြည်၏ အဓိက ဦးဆောင်နေရာမှ ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်။ (ဥပမာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်မပြု ဟူ၍ ဖြစ်သည်။) ဧည့်နိုင်ငံသား ဟူသည် သက်တမ်းသတ်မှတ်ချက် ရှိရမည်။ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုအား ကာလအပိုင်းအခြားမရှိ ဧည့်နိုင်ငံသား သတ်မှတ်ထား၍ မရချေ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးများတွင် ၅ နှစ်၊ ၃ နှစ်၊ ၇ နှစ် စသည့်ဖြင့် သတ်မှတ်ထား ၍၊ အာရှ- အာဖရိက နိုင်ငံများတွင် လူတစ်ဦး၏ သက်တမ်းတစ်လျှောက် သတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားမှ ၀င်လာသူတစ်ဦးသည် သူ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် ဧည့်နိုင်ငံသား အဖြစ်ဖြင့်သာ နေထိုင်ရမည် ဖြစ် သည်။ သို့သော် သူ့သားသမီးများနှင့် မသက်ဆိုင်ချေ။ တိုင်းရင်းသား- တိုင်းရင်းသည်ဟူသည်မှာ မူလဇစ်မြစ် လူမျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည်လည်း အမှန်တစ် ကယ်တွင် မူလဇစ်မြစ် မဟုတ်ချေ၊ ထိုဒေသတစ်ခု၌ မျိုးစဉ်မျိုးဆက် နေထိုင်ခဲ့သည်မှာ ရာပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်ထောင်ချီ၍ နေထိုင်ခဲ့သော လူမျိုးနွယ်ကို ခေါ်ဆိုသည်။ တိုင်းရင်းသားတိုင်းသည် နိုင်ငံသား မဟုတ်သကဲ့သို့ နိုင်ငံသားတိုင်းသည်လည်း တိုင်းရင်းသား မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဥပမာ- ကချင်တိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ နိုင်ငံသား မဟုတ်ချေ။ ကချင်လူမျိုးပေါင်း သန်းနှင့်ချီ၍ တရုတ်နိုင်ငံသား များအဖြစ် တည်ရှိနေသည်။ အလားတူ ကရင်လူမျိုးပေါင်း ငါးသိန်းခန့် ထိုင်းနိုင်ငံသား အဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ ရှမ်းလူမျိုးပေါင်း သန်းနှင့်ချီ၍- တရုတ်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း၌ နိုင်ငံသား အဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ ရခိုင်လူမျိုး ပေါင်း သန်းနှင့်ချီ၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား အဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးပေါင်း သန်းနှင့်ချီ၍ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသား အဖြစ်တည်ရှိနေသည်။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား ဟူသည်မှာ သူ့မျိုးနွယ်၊ သူ့လူ့သဘာဝ၊ သူ့ဝန်းကျင်၊ သူ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် တည်ရှိနေ သော လူမျိုးတူစုဖြစ်၍-၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအတွင်း ကျရောက်သွားသော လူအစုအဝေး၊ လူမျိုးနွယ်သာ ဖြစ် သည်။ နိုင်ငံနယ်နမိတ် သတ်မှတ်စဉ် အခြားနိုင်ငံဘက်သို့ ပါသွားသဖြင့်- မိမိနိုင်ငံအတွင်း ထိုလူမျိုးစုအား နိုင်ငံ၏ တိုင်းရင်းသား အဖြစ် မသတ်မှတ်၍ မရချေ။ တိုင်းရင်းသား တစ်စုချင်းသည် သူ့လူမျိုးတူရာအား သံယောဇဉ်ရှိနိုင်သည်၊ ချစ်ခင်ပတ်သက်နိုင်သည်။ ဆက်ဆံ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံသား ဖြစ်ခွင့်အား ဝေခြမ်းပေး၍ မရနိုင်ချေ။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာကရင်မှ ထိုင်းကရင်တို့အား သံယောဇဉ်ရှိမည်ပင်။ မြန်မာမွန်များက ထိုင်းမွန်တို့အား သံယောဇဉ်ရှိမည်ပင်- မည်သို့မျှ တားဆီး၍ မရနိုင်ချေ။ သို့သော် ထိုင်းလွှတ်တော်ထဲတွင် ပေးထားသော မွန်အမတ် ၁၈ ဦး၏ နေရာအား မြန်မာ မွန်များက တက်ယူ၍ မရနိုင်ချေ။ ထို့အတွက် ထိုင်းအစိုးရကလည်း ခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ချေ။ အလားတူ ထိုင်းနိုင်ငံသား မွန်တို့၏ သူ့နိုင်ငံအတွင်း ခံစားခွင့်များအား မြန်မာမွန်တို့အား မပေးနိုင်ချေ။ အလားတူပင် ဘင်္ဂဘီရခိုင်များ အနေဖြင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတို့၏ ခံစားခွင့်အား ရယူထားသည်။ အကယ်၍ ပြည့်ပြည့်၀၀ မရခဲ့လျှင်လည်း ထိုဘင်္ဂလီရခိုင်တို့ အနေဖြင့် ဘင်္ဂလီအစိုးရအား တော်လှန်ခွင့်ရှိသည်၊ တောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ သို့သော် ဘင်္ဂလီရခိုင်များ အနေဖြင့် မြန်မာအစိုးထံတွင် ထိုအခွင့်အရေးအား တောင်းဆိုခွင့် မရှိချေ။ လူမျိုးနွယ်တစ်ခု၏ မိမိတို့ နေထိုင်အခြေချနေခဲ့ရာ ဒေသအား နိုင်ငံပိုင်းခြား သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းကြောင့် ကွဲပြား သွားရသော တိုင်းရင်းသားတို့အား သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံမှ အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိပေသည်။ ပြည်ထောင်စု ဆိုသည်မှာ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များ စုပေါင်း၍ နိုင်ငံ ထူထောင်ခြင်းကို မခေါ်ဆိုပေ။ လူမျိုးနွယ် များစုနေခြင်းကို မျိုးနွယ်စု ဟုသာ ခေါ်ဆိုနိုင်ပေမည်။ ပြည်ထောင်စုဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ရန် နိုင်ငံအနှံ့ ဥပဒေသက်ရောက်စိုးမိုးစေရန် ဥပဒေအားဖြင့် စီရင်စုများတည်ဆောက်ရပေမည်။ တိုင်းဒေသများ နယ်နမိတ်သတ်မှတ်လျှက် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ဥပဒေ ကို စောင့်ရှောင့်ထိန်းနိုင်မည့် နယ်နမိတ်များ သတ်မှတ်ရ မည်။ ထိုနယ်နမိတ်တို့အား သက်ဆိုင်ရာဒေသရှိ လူများစု လူမျိုးနွယ်အမည်နာမဖြင့် မသတ်မှတ်သင့်ပေ။ ပြည်နယ်တိုင်း၊ တိုင်းဒေသတိုင်းတွင် လူမျိုးစုံတည်ရှိနေသည် ဖြစ်ရာ မြို့ပြလူနေမှုတည်ဆောက်ရေးပုံစံတကျ- ထိုဒေသရှိ ထင်ရှားသော မြို့အား ကိုယ်စားပြု၍ သော်လည်းကောင်း၊ မြစ်၊ တောင်တန်း တို့အား ကိုယ်စားပြု၍ သော်လည်းကောင်း ပြည်နယ်အမည်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်။ ထိုသို့ သတ်မှတ်ထားသည့် ပြည်နယ်အတွင်း တွင် မှီတင်းနေထိုင်သည့် မည်သည့် လူမျိုးနွယ်မဆို တရားမျှတ၍ လူ့အခွင့်အရေးကို အာမခံသည့် ဥပဒေ၏ အရိပ်ကို ညီမျှစွာ ခံစားခွင့်ရှိစေရပါမည်။ ထိုတိုင်းဒေသများ စုစည်းထားခြင်းဖြင့် တည်ဆောက်သည့် နိုင်ငံတော် သည်သာ- ပြည်ထောင်စု ဟူသော အမည်နာမဖြင့် ကိုက်ညီပေမည်။ ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရာတွင်- ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲစေရန် ပြင်းထန်ပြတ်သားသော ဥပဒေတစ်ရပ်အား ဆက်လက်ပြဌာန်းရပေမည်။ ၎င်းမှာ ပြည်ထောင်စုအား ဖြိုခွဲသူ၊ ခွဲထွက်သူ၊ ခွဲထွက်ရန် လှုံ့ဆော်သူအား နိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးနှင့် အပြင်းထန်ဆုံး အပြစ်ဒဏ် (ဥပမာ- သေဒဏ်) အဖြစ် ပြဌာန်းထားရပေမည်။ အလားတူ ပြည် ထောင်စုအတွင်း လူသားမျိုးနွယ်ချင်း စိတ်ငြိုငြင်စေမည့် လူမျိုးရေး စကားများ ပြောဆိုသူ၊ ပုတ်ခတ်သူ၊ ခွဲခြားသူ တို့အား အလားတူ ပြင်းထန်သည့် ပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ထားရပေမည်။ သို့မဟုတ်လျှင်- အနှိမ်ခံနေမည့် အစား သေရခြင်းက ပို၍မြတ်သည်ဟု ခံစားချက်များ ဖြစ်ပေါ်လာလျှက်- အနှိမ်ခံရသည့်မျိုးနွယ်တို့က အသေခံကာ ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်လိုစိတ်များ ပြည်လည်ရှင်သန်လာနိုင်သည်။ ထိုအခါ ခွဲထွက်သူအား သေဒဏ် ဟု ချမှတ်ထားလင့်ကစား ထိုဥပဒေမှာ အသုံးဝင်တော့မည် မဟုတ်ချေ။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီမှာ လွတ်လပ်ညီမျှသော ဥပဒေ၏ စောင့်ရှောက်မှုအား ရရှိနေလျှင် အာဏာမက် သော လူယုတ်မာတစ်စု၊ သို့မဟုတ် မတည်မငြိမ်မှုအား အကြောင်းပြ၍ စီးပွားရှာလိုသော လူယုတ်မာတစ်စုမှ လွဲ၍ သာမန်ပြည်သူအများစုကြီးမှာ ခွဲထွက်ရေးကိုသော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးကိုသော်လည်း စိတ်ဝင်စား တော့မည် မဟုတ်ချေ။ ဆက်လက်တင်ပြပါမည်။
နှတ်ခမ်း ဆီသုတ် ပါးမရိုက်ပါနဲ့ (ဌေးလွင်ဦး)
လက်ရှိ မြန်မာအာဏာပိုင်များနဲ့ တိုင်းရေးပြည်ရေး မငြိမ်မသက်မှုများကို တွေ့နေရတော့ ကျွန်တော် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ လန်းစစ်မှာ နေခဲ့စဉ်က အိမ်ချင်းကပ်နေထိုင်တဲ့ မဇိုလီနာရဲ့ စကားလေးကို သတိရမိပါတယ်။ သူ့ခမြာ- ကလေး ၄ ယောက်၊ ယောက်ျားမရှိ။ တနေ့မှာ သူက စိတ်တိုနေပြီး သူ့ကလေးတွေကို “နင်တို့လေ-- ငါ့ရဲ့ လင်ပါသားသမီးတွေ ဆိုရင် နှတ်ခမ်းဆီသုတ် ပါးချည်းရိုက်ပစ်မယ်၊”လို့ အော်ဟစ်နေတယ်။
သူ့စကားကို ကျွန်တော်က နားမလည်တော့- အမ၊ အမက ကလေးတွေကို ဆူတာ တစ်မျိုးပဲ။ “နှတ်ခမ်းဆီသုတ် ပါးရိုက်မယ် ဆိုတာ ဘာလဲ- ကျွန်တော်တောင် နားမလည်ဘူး ကလေးတွေက နားလည်ပါ့မလား” လို့ ပြော တော့- သူ ကလေးတွေကို စိတ်တိုနေတာ ပြေသွားပြီး- ကျွန်တော့ကို “ဆရာကလည်း-၊ ဒီကလေးတွေက ကျွန်မစကားကို နားမထောင်ဘူး- ရိုက်ချင်ထောင်းချင်စိတ်ကို ဖြစ်စေတယ်။ ကျွန်မသားသမီး အရင်းဆိုတော့ ရိုက်လည်း အပြစ်ပြောမယ့်လူက မရှိဘူးလေ။ တစ်ကယ်လို့ သူတို့က လင်ပါသားသမီးဆိုရင်- သူတို့ အပြစ်ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် ရိုက်ဘို့ လင်ရဲ့ မျက်နှာကို ထောက်နေရမယ်။ ဒီတော့ နှတ်ခမ်းမှာ ဆီသုတ်ထား လိုက် ပြီးရင်- ရှင့်ကလေးတွေက ကျွန်မစေတနာကို နားမလည်ဘူး၊ ဒီလောက် ဆီပြန်ဟင်းနဲ့ ကျွေးတာတောင် မစားဘူး ခံငြင်းတယ်၊ ဒါကြောင့် စိတ်တိုတိုနဲ့ ရိုက်ပစ်လိုက်တာ၊ မယုံရင် သူတို့နှတ်ခမ်းကို ကြည့်ပါလား- ဆီတောင် မခြောက်သေးဘူး၊” ဆိုပြီး ပြောလို့ ရတာပေါ့တဲ့။ (ကျွန်တော် တော်တော် သဘောကျမိခဲ့သည်။)
အခုတစ်လော- ရခိုင်ပြည်နယ် ကိစ္စတွင် နိုင်ငံတော်အစိုးရသာ သာမက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ- ခေါင်းကိုက်နေရသော ကိစ္စ ဖြစ်နေသည်။ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီကို ငယ်သံ ပါအောင် အော်ဟစ်တောင်းဆိုနေကြသူများပင်- မွတ်စလင် အတွက် ထည့်စဉ်းစားထားခဲ့ဟန် မရှိကြောင်း ပေါ် လွင်နေသည်။ မွတ်စလင်နှင့် ပတ်သက်လာလျှင် တစ်ဘက်စောင်းနင်း မြင်နေသည်။ လတ်တလောနှစ်ပေါင်း များစွာမှ စ၍ ဒီနေ့ထိ ပူပူနွေးနွေး ၀င်လာမစဲ တစ်သဲသဲ တရုတ်လူမျိုးများ ကိစ္စကို ခေါင်းထဲတွင် ရေခဲ ရိုက်ထားပြီး-၊ နှစ်ပေါင်းများစွာမှ ၀င်လာခဲ့၍ ၀င်ရောက်မှု ပြတ်စဲခဲ့သည်မှာလည်း နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီ ဖြစ် သော အိန္ဒိယမျိုးနွယ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမျိုးနွယ်တို့အား “ကုလားတွေ ၀င်လာနေသည်” ဟု မကြာခဏ ပြန်လည် နွေးပေးနေသည်။
ထိုမှ ကြားညပ်၍ မြန်မာပြည်ဘွား မွတ်စလင်တို့အား လူထုမှ အမြင်စောင်းစေရန် မကြာခဏ ၀ါဒဖြန့်နေသည်။ သွေးခွဲနေသည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ၀င်လာခဲ့သော ဘင်္ဂလီရခိုင်နှင့် ဘင်္ဂလီ ရိုဟင်ဂျာတို့မှ ဘင်္ဂလီရခိုင်တို့အား ဖုံးဖိထားပေးလျှက်- ဘင်္ဂလီရိုဟင်ဂျာ တစ်ချို့ကိုသာ လက်ညှိုးထိုးနေသည်။ ထိုမျှမက မြန်မာရိုဟင်ဂျာအားလုံး ကိုပါ- ဘင်္ဂလီများ ဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲနေသည်။
လက်ရှိ ရခိုင်အမျိုးသား တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ၏ ဦးဆောင်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အမတ် ဦးအေးမောင်သည်ပင် ၁၉၅၃-၅၄ ခုနှစ်ကမှ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ၀င်လာသော ဘင်္ဂလီ မိဘစစ်စစ်မှ မွေးသော ဘင်္ဂလီရခိုင်ဖြစ်နေသည်ကို မသိဟန်ပြုလျှက်- နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ အမြစ်တွယ်နေသည့် ရိုဟင်ဂျာတို့အား ပေါ်လစီချ နှိပ်ကွပ်နေသည်။ ဘင်္ဂလီရခိုင်တို့က မြန်မာနိုင်ငံအင်အား ချိနဲ့စေရေးကိုသာ ကြံဆောင်နေပြီး ဗမာ့အခက် ရခိုင့်အကွက် (ရခိုင်နိုင် ငံခွဲထွက်ရန်) ဟု ခံယူထားသူများကို အားပေးမြှောက်ပင့်နေခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား အဖြစ် မြန်မာနှင့်အတူ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူပူးပေါင်းနေလိုသော ရိုဟင်ဂျာတို့အား အတင်းဖယ်ထုတ်နေခဲ့သည်။ ခွဲထွက်လိုသူတို့အား အားကောင်းစေရန် ပြုစုလျှက်၊ ပူးပေါင်းနေလိုသူတို့အား ချိနဲ့စေရန် ပေါ်လစီချမှတ်ထားခြင်းမျိုးဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်မည်နည်းဟုပင် တွေးမိဟန်မရှိချေ။
ရိုဟင်ဂျာများကိုသာမက မြန်မာတစ်ပြည်လုံးရှိ မွတ်စလင်တို့အား ရသည့်နည်းဖြင့် နှိပ်ကွပ်ရန် ပေါ်လစီမျိုးစုံ ချမှတ်ထားသည်။ ဗမာဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ဗမာမွတ်စလင် ညီညွတ်ချစ်ခင်နေမှုများအား စီမံချက်တကျ ဖြိုခွဲပစ်ခဲ့ သည်။ ထိုသို့ မွတ်စလင်မုန်း စိတ်ဓါတ်များ သီးပွင့်လာသော အကျိုးဆက်ကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း ပဋိပက္ခ ပေါ်ပေါက်လာရခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
ထိုပြသနာမှာ ဖုံးမရ၊ ဖိမရ တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိမြင်လာ၍ ပွက်လောရိုက်လာသည်။ ထိုအခါ- နိုင်ငံတော်တွင် လူဝင်မှုဥပဒေ တစ်ရပ် ပေါ်ပေါက်ရန် အပူတစ်ပြင်းလိုအပ်လာသည်ဟု နိုင်ငံရေးသမားတိုင်း ဆင်ခြင်လာတော့ သည်။ သို့သော် သူတို့၏ ဆင်ခြင်မှုတိုင်းတွင် ထိုနိုင်ငံသား စီစစ်ရေး ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ရိုဟင်ဂျာနှင့် မွတ်စလင် တို့အတွက်သာ ရည်ရွယ်နေပြီး- နိုင်ငံခြားမှ ၀င်လာသူ ရခိုင်၊ တရုတ်တို့အား ရည်ရွယ်ပြောဆိုခြင်း မဟုတ် ကြောင်း သိသာ ထင်ဟပ်နေပြန်သည်။
နိုင်ငံတော်ကို တစ်ကယ်ချစ်လျှင် နိုင်ငံတော်၌ ပြဌာန်းသော ဥပဒေသည် နိုင်ငံတွင်းရှိ လူအားလုံးအတွက် သက်ရောက်စေရမည် ဖြစ်သည်။ တရုတ်နှင့် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာတို့အား ချန်လှပ်ထားလျှက် မွတ်စလင်အတွက် သာ ရည်ရွယ်ခဲ့လျှင်- ထိုအမှုသည် ကမ္ဘာက အမြင်ကောင်းအောင်- “နှတ်ခမ်းဆီသုတ်လျှက် မြန်မာမွတ်စလင် တို့ အားပါးရိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်တော့သည်။”
မြန်မာမွတ်စလင်တို့ အနေဖြင့် တစ်ပြေးညီသက်ရောက်သော ဥပဒေနှင့် ပေါ်လစီများကိုသာ လိုလားပါသည်။ မိမိအနေဖြင့် ဥပဒေက သတ်မှတ်သည့် အတိုင်း ကပြား ဖြစ်သည်ဆိုလျှင် ကပြား ဟု ခံယူရဲသည်။ သို့သော် ထိုသို့ ကပြားဟု သတ်မှတ်သော ဥပဒေသည် တရုတ်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ၀င်လာသော ရခိုင်ဘင်္ဂလီကို သော်လည်းကောင်း တစ်ပြေးညီ သက်ရောက်မှု ရှိစေရမည် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ အပေါ်တွင်လည်း မတော်မ တရား ဆောင်ရွက်ရန် မလိုပါ။
ထိုသို့မဟုတ်- တစ်ဘက်စောင်းနင်း မတရား ပြုမူလျှင် မည်သည့် မတရားသည့် ဥပဒေ၊ ပေါ်လစီ၊ အမိန့်၊ ခွဲခြား ဆက်ဆံမှုကိုမဆို- တရားမျှတမှုအားရှေ့ရှုသူတို့က လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။ ထိုအခါ မြန်မာပြည်နှင့် မြန်မာအာ ဏာတို့သည် ကမ္ဘာ့အလယ်၌ ဆက်လက် အရှက်သိက္ခာမဲ့နေရမည်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF) ၏ ရဲဘော်ဟောင်းတစ်ဦး
Update: Violence continues in Arakan state
"UN's intervention is seemingly not effective" The government authorities do not installed Law and Order for Rakhine people who are continuously doing crimes. A few Rakhines those arrested from Sittwe, Kyauktaw and Maungdaw were also released after days. Beside, police authority are arresting Rohingya elders and youths from every village of Sittwe, Maungdaw, Rathedaung and Kyauktaw townships and framing them with false charges. UN's intervention is seemingly not effective therefore Rohingya people are continued to face tyrant attacks of Rakhines and arbitrary abuses of local authorities. While there is ongoing heavy raining and flooding, it is more than two weeks now they are confined by military guards without supply of food and medicine. A relief blog- OCHA's report states that the WFP has provided 725 metric tons of food commodities (rice, pulses, oil and salt) to over 92,000 affected people in five townships, Sittwe, Pauktaw, Maungdaw, Rahtedaung and Buthidaung. The government report also shows that it has received donation nearly 200 millions Kyat for Arakan crisis. However, all aid supplies are reached to government designated relief centres where authority places perpetrator Rakhine family members only. Despite the INGOs have well experiences about the nature of government authorities, they have not yet ensured aid delivery for homeless victims of Rohinngya. Similar complaints received for the past Cyclone Giri in Oct 2010 that hit along the coastal areas of Kyaukfru, Myebon, Myinbya, Pauktaw townships where fishing villages were mostly affected. Muslim victims from fishing villages were barred from receiving aid and assistance by local in-charge staffs who monitored distribution aid. Rakhine people who involved directly in recent riot of Sittwe We had escalatedanumber Rakhine people who involved directly in recent riot of Sittwe. Again these people are warmly received gratitude inaFace Book page ofaRakhine. They are; RNDP psd Dr Aye Maung, Tat Thu Aung- Kuan Yat Society, chairman U Shwe Tun Aung- the Merchant Association of Arakan, Rakhine Rakhita Association, Sayadaw U Pinya Zya Ra. And the rest who visibly involved are; 1)Shwe Tha Zin Hotel owner Tan Shwe, 2)Kiss Hotel owner Kyaw Thein (led in Nazi and Santoli), 3)Win Maunk umbrella shop owner, 4)Aung Thu Kha photo shop owner, 5)Shwe Nyo Nyo loterry and medicine shop owner, 6)Workers of Sein Video Hall, 7)U Maung Tan Hlaing from ward(2/Kha) of Min-Gan village, 8)Chairman U Tan Win of Aungmingala quarter, 9)RNDP member Balagyi, and 10)Ko Thein Shwe (weight player). The source confirms that U Maung Tan Hlaing is who began the riot in Sittwe and now taking refuge in Rwa U monastry of Min Gan village. Update: Violence continues in Arakan state Akyab/Sittwe city 29 June, Friday There are total 172 Rohingyans involving under age detained in military camp. The source confirmed all of them were brought from Rathedaung township after tortured in the hands of Rakhines from Ku Taung. 30 of them were reportedly taken to unknown. They were neither sent back to Rathedaung nor transferred to custody. One of them was died yesterday and burried at Thakkay Byin village (Sakki Fara). Afternoon: Bsc Hla Maung's house in the Ambala area (down town) was attacked byagroup of Rakhines and looted all goods and cash when Police and Paramilitary forces are surrounding from out side. Six international and local staffs of INGOs, were arrested. The source said they are aid workers from UN organization, AZG and WHO. Thier arrest could be suspect of whether they have any recording devices. Morning: A Hindu woman came out from Aungmingala area, was beaten by four Rakhines in the present of police. Her live was spared after they knew she is not reallyamuslim. Kyauktaw Township 29 June, Friday 11:50am: The 700 years old ancient mosque (Myoatma Jarmae Mosque) situated between the market and Manaegya Fara, was destructed byagroup of Rakhines. At the time of military forces arrived there after informed byaKhami (tribe people), its walls and veranda have been destroyed. 28 June, Thursday4homeless Rohingyans of Sangadaung village (near Sugar Mill) were died from starvation and lack of shelter. The Rohingya own lands in this village were also replaced by Rakhine people themselves. Rohingya people own shops in the market of Kyauktaw were seized by municipal authority. The valuable things were taken away by Rakhines and proudly saying that all resources and belongings in the territory of Rakhine state are their own. Two homeless villagers from Khaungdok Alay Kyuan (Barua Fara) were died in the flood of Kaladan River. One of them is identified asabrother of Mv.Habi who live in Denmark. ............................ Attach file-1, is re-prepared list of causalities in Sittwe. As, latest escalation from Sentoli village says number of houses burnt in second attack was added to total about 180 and death tools added to 50 total. The remaining half-destroyed mosque was also demolished by authority in the past four days. Attach file-2, is list of causalities in Kyauktaw, Rathedaung and Rambre.
Source : BRAT
Worse, Rohingyas were getting killed in the rioting when she was onatour to Europe. She didn't speak about the violence back home, issued no direct appeal to her people to stop violence and while newspapers said she was treated like 'Rockstar' and awarded doctorate, Suu Kyi made THE controversial statement. The 'iron' woman, who was supposed to have spoken for the rights of the community, has gone to the extent of questioning that if the minority indeed belongs to Burma. What can be the biggest irony? She wasahero for everyone but no more for me and perhaps many others. The Rohingyas,astateless people, have been living in Myanmar for centuries until the military government in 1982 [throughacitizenship law] decided to strip the off their nationality. The community that is termed by Amnesty and other agencies as one of the most persecuted in the world, is now termed 'outsider'. Rohingyas population estimates range from 8,00,000 to 1 million though it is suspected that the government figures are markedly less than the actual population. The community has faced hostility, prejudices and massacres for the last 60 years.
That't what politicians do. But this is not expected fromaleader of her stature. The ethnic riots between Rakhine Buddhists and Rohingya Muslims left nearly 90 dead while 90,000 were displaced. But she ket mum. Bangladesh didn't let fleeing Rohingyas, who wanted an asylum, and forced them to go back to their country. It was in this scenario that reporters during her tour to England, France, Ireland and other countries, asked her repeatedly on this humanitarian crisis. She kept mum and avoidedacomment on this issue, even as the extent of violence had shaken her country.
When she was not left with any alternative, she shrewdly said, "The rule of the law is needed". Is this you expect fromastatesman,aNobel prize winner oraworld leader orafighter? Newspapers were finally getting critical about the fact that her tour appeared moreacelebration and PR exercise.
She seemed to echo the hardline sentiment that Rohingyas are illegal immigrants [refugees] in Myanmar. She finally said that Myanmar must clarify citizenship rules and that she was unsure whether Rohingyas could be regarded as Maynamar nationals. WHAT A SHAME!
The world is changing Ma'am. The fascist rule had somewhat managed to keep the country insulated but news about the clashes and genocides can't be suppressed any more. That day I saw the group on Facebook group 'I have no respect left for you Aung San Suu Kyi...'.A leading newspaper questions, 'Has Suu Kyi lost that moral voice?' It is no bravery to get aligned to right-wing forces for minor gains. Nationalism becomes Jingoism easily. It takesaGANDHI to counter populist mood and use the leader's moral authority to say things that may not appear nice [and to go against the tide]. So those who compared you to the great Nelson Mandela, may have to doarethink now. As an activist you struggled, spentalifetime fighting oppressive forces. People put faith in you but you let us down. Your tour is over and soon you will be back to Yangon [formerly Rangoon]. If you don't speak for the victims, just because they look like Bengalis, you will be considered an accomplice in letting this persecution go on. We urge you to make amends and take steps for reconciliation between Rohingya and the rest. Isn't it time for you to live up to your own reputation and redeem yourself?
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၈ ရက်က ပဲရစ်မြို့၌ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် AFP သတင်းဌာန သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းနေစဉ်။ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မနေ့က ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပဲရစ်မြို့မှာ AFP သတင်းဌာနနဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေးမြန်းခန်း မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အခုလို ပြောခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာတွေမှာ တရားဝင် နိုင်ငံသားဦးရေ ဘယ်လောက် ရှိတယ်၊ ဘယ်သူတွေဆိုတာ အသေအချာ စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုအပ်နေကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နယ်စပ်နဲ့ နီးကပ်နေတဲ့အတွက် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဆိုင်ရာ ထိန်းချုပ်မှုတွေမှာ ယိုပေါက်တွေ၊ အားနည်းချက်တွေ များနေတဲ့ အကြောင်းလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က AFP သတင်းဌာန ကို ပြောပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ် နောက်ဆုံးအခြေနေ နဲ့ ရွေးကောက် ပွဲ ကော်မရှင်က သတိပေးခဲ့တဲ့ Burma, Myanmar ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ် သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ပဲရစ်လေဆိပ် ကို ရောက်နေ တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇေယျာသော်ကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားတာကိုလည်း တဆက်ထဲ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
US Senate confirms 1st ambassador to Myanmar in 22 years
Press Releases Jun 29 2012 McConnell Applauds Confirmation of Derek Mitchell as Ambassador to Burma Washington, D.C. – U.S. Senate Republican Leader Mitch McConnell issued the following statement Friday after the Senate confirmed the nomination of Derek Mitchell as ambassador to Burma: “I congratulate Derek Mitchell on his confirmation as our ambassador to Burma. He has done an excellent job in his current role as Special Representative and Policy Coordinator for Burma; his experience will serve us well in the region as he builds on the strong foundation established by Michael Thurston and our embassy team in Rangoon." Background: Senator McConnell traveled to Burma from January 15-17 of this year. During the visit, he met with Daw Aung San Suu Kyi, Burmese government officials, recently released political prisoners and U.S. Embassy personnel. The Senator discussed political reform, bilateral relations and regional security issues with Suu Kyi and the Burmese leaders. For nearly 20 years, Sen. McConnell has beenastrong advocate for political reform, reconciliation and democracy in Burma. Every year since 2003, Senator McConnell, along with Sen. Dianne Feinstein, has introduced and helped enact legislation placing sanctions on the Burmese government. He also consistently called for the release of Suu Kyi and other political prisoners.
Myanmar ethnic alliance says Rohingya “not Burmese”
Malaysia’s Rohingyas protest violence in Myanmar.
KUALA LUMPUR: Adding anger to an already tense situation in Myanmar,agroup of 8 ethnic parties currently allied have said the country’s Rohingya Muslim minority are not considered an ethnic minority.
The statement by the group’s reiterated their position adopted in 2005.
It comes as the Rohingya minority in the country face waves of attacks and reported massacres in the Western Arakan area of the country.
NDF Secretary Khun Oh said, “Even before the current conflict, there has been frequent conflict between Rakhine and Bengalis,” referring to the Rohingyas as people from Bangladesh.
However, Khun Oh told local media that some Rohingyas could be granted Burmese citizenship if they met appropriate qualifications, such as knowledge of the national language.
The stateless community has struggled to findapositive way of life as many fled violence in Myanmar in the early 1980s.
The Rohingyas said the flare up of violence in Myanmar has claimed the lives of more than 1,000 people in the past three decades and they want an end to the alleged atrocities.
They wantaUN peacekeeping force as well asamedical team to be sent there immediately.
Many fear that thousands of Rohingyas may be heading towardsacrisis situation without food, shelter and medication.
အီဂျစ်နိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးရှေ့ အီဂျစ်နိုင်ငံသားများက ဆန္ဒပြ
အီဂျစ်နိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးရှေ့တွင် မြန်မာပြည်ရှိ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်မ်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက် အသတ်ခံရမူအပေါ် အီဂျစ်နိုင်ငံသားများက ဆန္ဒပြ
ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့ တွင် အ်ီဂျစ် နိုင်ငံြ့မန်မာသံရုံး ရှေ့တွင် အီဂျစ်နိုင်ငံသား ၂၀၀ ကျော်က မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း အုပ်စုကွဲ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခဲ့မူများကြောင့် မွတ်စလင်မ် အမြောက်အမြား အသတ်ခံရမူအပေါ် ဆန္ဒပြခဲ့ကြကြောင်း ဆန္ဒပြသူများက မွတ်စလင်မ်များကို သတ်ဖြတ်သူများသည် အကြမ်းဖက်သမားများ ဖြစ်ကြောင်း “မွတ်စလင်မ်များကို သတ်ဖြတ်နေမူများရပ်’’ “ အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်နေမူများရပ်” “မြန်မာစစ်အုပ်စု ကျဆုံးပါစေ”အစရှိသည့် ကြွေးကြော်မူများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါဆန္ဒပြပွဲ သို့ အီဂျစ် Asala ပါတီဝင် လွှတ်တော်အမတ်ဟောင်း မမ်ဒို အစ်မာအီလ် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ သူက ကျွန်တော့် အနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံရေးအုပ်စု တစ်ခုကိုမှ ကိုယ်စားပြု ဆန္ဒပြတာမဟုတ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွတ်စလင်တွေကို အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်နေလို့ ၊ ၀တ်ပြုမှုတွေကို ပိတ်ပင်တားဆီးနေလို့ ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြားသွားပါတယ်။
မြန်မာသံရုံးရှေ့မှာ ဆန္ဒပြသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဝေးလ်အာလမ် က “ကျွန်တော်တို့ တာဟိရ်း ရင်ပြင်ကနေ ဒီကိုရောက်လာရတာက ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်မ်တွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီအတိုင်းနုတ်ပိတ်ထိုင်ကြည့်နေမှာ မဟုတ်ဖူးဆိုတဲ့ အကြောင်း မြန်မာအစိုးရသိအောင် ပြောချင်လို့ လာခဲ့တာပဲ” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆက်ပြီး အာလမ်က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းတွေက မြန်မာအစိုးရကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးမူတွေ မလုပ်မချင်း ဆန္ဒဆက်ပြသွားမယ်လို့လဲ ကတိပြုပြောကြားသွားပါတယ်။
တောင်အာရှ အဆက်အနွယ် ရိုဟင်ဂျာ တွေဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်တဲ့ ဒီကနေ့မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အဆိုးရွားဆုံး လူမျိုးရေးခွဲခြားမူတွေကို ခံစားနေရတာဖြစ်ပြီး သူတို့တစ်တွေဟာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြသော်လည်း ဘယ်သူကမှလက်ခံခြင်းမရှိဖြစ်နေကြောင်း Egypt Independent သတင်းစာ တွင်ဖေါ်ပြထားရှိပါသည်။
Credit : Zaid- MMM ( Myanmarmuslim.net)
Burma to go down the drain (Aung Tin)
Aung Tin, Rohingya News, Roit News
We all know the notorious system of apartheid,aracism in South Africa, segregating people based on their ethnicity. Who can’t go to which place, can’t take which transport, can’t go to which school, and can’t go into which career and so on. For the good of the country or any society, there’s no doubt and no brainer that different society must work together. Apartheid isavery disgusting and inhumane ideology and it has no place in today’s world; let’s forget about asking for it and propagating it, even accepting that system is extremely horrible.
On RNDP’s press release 04/2012 dated 2012 May 25, sending back the illegal immigrants to their original country is not wrong and it’s acceptable. But regarding 6(b), instead of “taking legal actions against those criminals and lawbreakers, and working out to reconciliation and peaceful co-existence of all citizens”,
RNDP demands to segregate the Arakanese Buddhist and other Muslims (mostly Bengali descents) by separating the Muslims away from their places.
Those Burmese political, ethnic, social, religious and business leaders should answer what is this if not apartheid. Though they know this sicken and awful press release demand, being silent, and not condemning openly is certainly concerting to it and it’sahistorical liability on all Burmese leaders. If in future, if there’re any similar occurrences, conquering the houses and businesses of different ethnic and religious minorities, how are the Burmese political leaders going to handle this issue?
Leaders should learn from the lessons of Bosnia, Rwanda and alike. Prevent before it get worse. Get the country on the right path. The democratic forces urgently need to reorganize and reinforce in truth manner to ward off the hardliners of old guard who have been openly trying to set up the democracy-skinned quasi-civilian government permanently controlled by generals.
The Official letter-head of
RNDP Head Quarters
(Complete with the flag, emblem, seal and Coat of arms)
The Rakhine Nationalities Development Party RNDP
Party Policy announcement of Post-Riots relocations
Announcement No. 04/2012
Rakhine State and Rakhine people are sufferingalot of national difficulties because of the communal riots that started on 8 June 2012.
Our Party viewed that the Federal (Central) Government and all the Myanmar Ethnic people need to cooperate in solving the above difficulties.
From the present events, we could deduct that Bengali People have being entering the Rakhine State illegally during every period of history and their present population is endangering the Rakhine People and all other Myanmar Ethnic population now.
Since the historical Communal Riots in 1942 between the Myanmars and Bengalis there erupted numerous riots.
Present 2012 riots is worse than those riots in 1988, 1996 and 2001 and it is threatening the security and National Interests of all the Rakhines and Myanmars.
The Illegal Bengalis are creating the fake history with the newly adopted name, Rohingya, and are using terrorism to endanger the lives, properties and the security of all the Rakhine People and the National Security of Myanmar. So our party hereby view that we need the final solution to solve this problem.
6. To solve the above problem, our party hereby announced our policies below:
Government and Rakhines must combine forces to lay downaSecurity protocol for the immediate security of the Rakhine State and Rakhine people.
Bengalis must be segregated and settle them all in the temporary separate places so that theRakhines and Bengalis would not be able to mix together in the villages and towns in the Rakhine State.
All the Federal Ethnic Groups should cooperate in preventing the illegal invasion of Bengali migrants into Rakhine State and various parts of Myanmar.
To discuss with United Nations and International Community to repatriate the non-citizen Bengalis to the third country inashort period.
The Rakhine Nationalities Development Party Head Quarters
Distributed with the Publishing Permit No.- U Myint Naing- Na Tha-013
…………………………….. The end of the translation………………………
U.S. Assistant Secretary of State urges Bangladesh, Burma to help Rohingyas
Rohingya News, US State Dept
U.S. Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor MichaelPosner discusses the 2011 Human Rights Report on LiveAtState By AP News Jun 29, 2012
WASHINGTON (AP) — The United States is calling on both Burma and neighboring Bangladesh to help the victims of recent communal violence in western Burma that left scores dead and thousands displaced.
Assistant secretary of state for human rights and democracy, Michael Posner, said Thursday the governments of both countries were obligated “to ameliorate this very challenging situation.”
Bangladesh has turned back more than 2,000 ethnic Rohingyas this month who tried to enter the country after clashes between Rohingyas and ethnic Rakhine Buddhists in Burma.
Posner said the U.S. has urged Bangladesh to open its borders in accordance with its international obligations underarefugee convention.
He said Washington was also very concerned about 15,000 people displaced inside Burma’s Rakhine state.
Posner was responding toaquestion submitted duringalive webcast.
မြန်မာပြည် သွားပြီလား (အောင်တင် )
ကျနော့အမြင်မှာတော့ မြန်မာပြည်ဟာ မြောင်းထဲကို အရှိန်နှင့် ဒလဟော ထိုးကျနေပြီလို့ ထင်တယ်။ ပိုဆိုးတာက မိုက်မိုက်မဲမဲ မြောင်းထဲတွန်းချသူတွေကို မတားဆီး၊ မကန့်ကွက်တဲ့အပြင် မသိကျိုးကျင်ပြုနေတဲ့သူတွေက ထုနှင့် ထည်နှင့် ရှိနေရုံတင်မက မသိမသာဖြစ်ဖြစ်၊ သိသိသာသာဖြစ်ဖြစ်၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်ဖြစ် အားပေးအားမြှောက်နေသူတွေနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောက တစ်ခုလုံးမှာ ပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တောင် ထင်မှတ်စရာဖြစ်နေပါပြီ။ နိုင်ငံရေးအရ မှန် မမှန်(Political Correctness)ကို အမြဲထောက်ပြနေတတ်တဲ့ နိုင်ငံရေး ပဏ္ဍိတ်တွေကလည်း အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဆွံ့အနှုတ်ပိတ်နေကြတယ်။ ဒါက ကောင်းတဲ့ အလားအလာ၊ ကောင်းတဲ့ နိမိတ်(omen)တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာလွန်းပါတယ်။ တောင်အာဖရိကမှာ နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Apartheid ဆိုတာကို ကျနော်တို့အားလုံး သိကြပါတယ်။ လူတွေကို မျိုးနွယ်အရ သီးခြားစီ ခွဲခြားထားခြင်း(Segregation)ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုးတွေ ဘယ်နေရာကို မလာရ၊ ဘယ်နေရာမှာ မနေရ၊ ဘယ်ကားကို မစီးရ၊ ဘယ်စားသောက်ဆိုင်မှာ မစားရ၊ ဘယ်ကျောင်းကို မတက်ရ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အလုပ်ကို မလုပ်ရဆိုတဲ့ လူမျိုးချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ မြို့ရွာ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံအကျိုးအတွက် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မတူညီသော လူအုပ်စုနှစ်စုက အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပင် မလိုတော့ပါ။ အင်မတန် ရွံရှာစရာကောင်း၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အယူအဆဆိုးဖြစ်တာမို့ ယဉ်ကျေးတဲ့ ယနေ့လူ့ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လိုလူသားဆန်တဲ့ လူသားမျိုးကမှ ကျင့်သုံးဖို့ တောင်းဆိုတာ၊ လှုံ့ဆော်တာ မပြောနှင့် ဒီအယူအမြင်ကို လက်ခံပါတယ်လို့တောင် မပြောရဲတဲ့ အင်မတန် ဆိုးယုတ်သိမ်ဖျဉ်းတဲ့ အယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် ကျနော်တို့ အမိမြန်မာပြည်မှာ ဒီဝါဒဆိုး segregationကို အတိအလင်း ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုရဲတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်အစိုးရဝန်ကြီး၊ ဘယ်နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးစတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကများ ကန့်ကွက်သံ ကြားရလေမလားလို့ နှစ်ရက်ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ရှက်စရာ ကြောက်စရာကို မရှက်မကြောက် လုပ်သူက လုပ်တယ်။ ဘယ်သူကမှ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ တစ်ခွန်းဆိုသံ မကြားရသဖြင့် မြန်မာပြည် သွားပြီလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (RNDP၏ ဤကြေငြာချက်ကို မသိရှိသေးသူများအား မဆိုလိုပါ။) RNDP (ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ)က ၂၀၁၂ခု မေလ (၂၆)ရက်နေ့စွဲနှင့် ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်အမှတ် ၀၄/၂၀၁၂မှာပါတဲ့ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူများကို အရေးယူတာ၊ မူရင်းနိုင်ငံကို ပြန်စေတာတွေကိုတော့ လုံးဝ သဘောတူပါတယ်။ အငြင်းပွါးစရာ မရှိပါ။ သို့သော် ကြေငြာချက်ရဲ့ အမှတ်စဉ် ၆(ခ)မှာ၊ တရားဥပဒေချိုးဖေါက်သူတွေ၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို ထိရောက်စွာ အရေးယူစေပြီး နိုင်ငံသားအချင်းချင်း သင့်မြတ်ရေး၊ အေးချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ရေးကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဦးဆောင်ပေးရမည့်အစား ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့ရွာများ၌ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ နီးကပ်စွာရောနှောနေထိုင်မှု မရှိရအောင် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအား သင့်တော်ရာ၌ ယာယီသီးခြားနေရာချထားရန် လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါကို Apartheid (Segregation) မခေါ်ရင် ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ တိုင်းရင်းသားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွါးရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြေကြပါ။ ဒီလောက် ဆိုးသွမ်းဖေါက်ပြန်တဲ့ ကြေငြာချက်ကို ကြားသိလျှက်နှင့် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း၊ လူသိရှင်ကြား မကန့်ကွက် မရှုံ့ချခြင်းသည် သဘောတူ(Consent)သည်ဟု ဆိုနိုင်သဖြင့် ယနေ့ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများပေါ်တွင် သမိုင်းကြွေးတင်သွားပါပြီ။ နောင် မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြားနေရာတွေမှာ အလားတူဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာရင်၊ ဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပြီး ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူသူတွေရဲ့ အိုးအိမ်တွေကို မတရားသိမ်းပိုက်လိုလျှင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမလဲ။ ဒီလိုတောင်းဆိုသူတွေဟာ မိမိကိုယ်တိုင်က လိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို နားမလည် တန်ဖိုးမထားရုံတင်မက ကျင့်သုံးလိုဟန်ပင် မရှိကြောင်းကို အတိအလင်း ပြဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်တည်လာပုံ၊ နိုင်ငံ စတင်တည်ထောင်စ ကတည်းက နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တွေမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံတွေ ပြန့်နှံ့နေထိုင်ပုံ၊ တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ် ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုနှင့်အတူ ပါဝင်လာတဲ့ လူမျိုးတွေကို တရုပ်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာစသဖြင့် နိုင်ငံသစ်တွေက လက်ခံပေးရပုံ (ခိုးဝင်သူတွေကို လက္ခံပေးဖို့ မပြောပါ။) စသည့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကို အခြေခံလောက်မှ နားမလည်ခြင်းကို ပြပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက (၂၁)ရာစုမှာ လူသားအခြေခံပြီး လူသားချစ်စိတ်နှင့် တိုင်းပြည်ကို လက်တွေ့ကျကျ တည်ဆောက်ရမည့်အစား စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေနှင့် မညီမညွတ်ဖြစ်စေကာ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲထိုးချမည့် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသော ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့သာသနာ၊ ငါ့လူမျိုးဆိုတဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်ကို တာဝန်မဲ့ လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ပြည်သူတွေကို အကျိုးဖြစ်အောင် အသိညာဏ်ဖွင့်ပေးရမည့်အစား အကျိုးယုတ် အသိကန်းအောင် အဆိပ်ခပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ (ရှေးခေတ်က ဟစ်အော်လာကြခဲ့တဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို လက်သုံးပြုလို့ မလုံလောက်တော့ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ၊ နတ်ကိုးမှုစသည်ကို စွဲပြီး လူမျိုးရေးတရားလုပ်လို့မရဘူး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ကိုးကွယ်ပြီး တိုင်းရေးပြည်ရေးမှာ ညီညီညွတ်ညွတ် စုပေါင်းလုပ်ကြဖို့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၁)ရက် ပင်လုံညီလာခံမှာ လက်မှတ်မရေးထိုးမီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကတိပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သံဃာတော်များက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဟု ဆိုခြင်းကို နားလည်ပေးနိုင်သော်လည်း လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ သာသနာ ပေါင်းစုံကို ကိုယ်စားပြုရမည့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဟု ပြောလာမည်ဆိုလျှင် မိမိစီးသောမြင်းကို အထီးမှန်း အမမှန်း မသိသူများ ဖြစ်ရာ၏။ လွန်ခဲ့သော (၆၆)နှစ်ကပင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တည်ထောင်ရေးအတွက် လက်တွေ့မကျဟုဆိုကာ ပယ်ချခဲ့သော အယူမှား၊ အမြင်မှားဖြစ်သည်ကို သတိချပ်သင့်လှ၏။) ခေါင်းဆောင်ကြီးများအနေနှင့် ဘော့စနီးယား၊ ရဝမ်ဒါစတဲ့ နိုင်ငံတွေက လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်းတွေကို ပြန်စဉ်းစားပြီး သင်္ခန်းစာယူကြပါ။ အခြေအနေတွေ ပိုမဆိုးလာအောင် အချိန်မီ တားဆီးကြပါ။ တိုင်းပြည်ကို လမ်းကြောင်းမှန်ကို ပြန်တင်ပေးကြပါ။ ပြန်လည်ခေါင်းထောင်ဖို့ အထင်အရှား ကြိုးစားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေခြုံ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးက တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထု၏ နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်သော စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် အနိုင်တိုက်ယူပါ။ အနှစ်ငါးဆယ်မှာ ရတောင့်ရခဲဖြစ်တဲ့ အခုလိုအခွင့်အခါမျိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ ဒေါ်စုက ယနေ့တင်ဘဲ ပြင်သစ်မှာ ပြောလိုက်ပါပြီ။ မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးမချနိုင်ရင်တော့ မြန်မာပြည် နောက်တစ်ချီ သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် အနှစ် ငါးဆယ်လေးလောက်ပါ။ အောင်တင် ဇွန်လ(၂၈) ၂၀၁၂
*************************************************************************Burma to go down the drain
On RNDP’s press release 04/2012 dated 2012 May 25, sending back the illegal immigrants to their original country is not wrong and it’s acceptable. But regarding 6(b), instead of “taking legal actions against those criminals and lawbreakers, and working out to reconciliation and peaceful co-existence of all citizens”, RNDP demands to segregate the Arakanese Buddhist and other Muslims (mostly Bengali descents) by separating the Muslims away from their places. Those Burmese political, ethnic, social, religious and business leaders should answer what is this if not apartheid. Though they know this sicken and awful press release demand, being silent, and not condemning openly is certainly concerting to it and it’sahistorical liability on all Burmese leaders. If in future, if there’re any similar occurrences, conquering the houses and businesses of different ethnic and religious minorities, how are the Burmese political leaders going to handle this issue?
June 28, 2012(Translated to English by Zin Bo Aung)
Apparently, Bangladesh's pushback of helpless Rohingyas from its territorial waters into those of Myanmar seems to have worked. Or has it? Given that 30,000 were afflicted in the latest eruption of ethnic violence in Rakhine state capital Sittwe, this may have been justastalling operation. Since no media is allowed in the troubled zone, there's no way knowing whether those sent back by us are safe. Perhaps, Bangladesh's stern approach has gone down well with the Myanmar authorities. For once, we could bite the bullet and let them float into the elements of nature, or shove them into the tunnel of uncertainty.
Clearly, all this isapalliative, and notacure of the disease. Because the fundamental issue of statelessness of the Muslim minority in the Rakhaine state of Myanmar remains intact. Persecution and ethnic cleansing of varying intensity follow from this non-existent status of not even second class citizens.
So long as this seminal question of nationality is not resolved, Rohingyas in boatloads or trickles would keep coming in through the 200km long porous border between Bangladesh and Myanmar. Thus, we find in the UNHCR's version, eight unregistered Rohingya refugees to every registered one. In contrast, government's ratio between listed and unlisted refugees stands at 15 to 1. This demographic pressure on an already densely populated part of Bangladesh is headed for snowballing with severe repercussions in the horizon.
One reputed international observer Derek Tonkin's position on this fallacy is unassailable: "The statelessness of the Rohingya isabreach of Article 15(1) of the Universal Declaration of Human Rights which provides that: 'Everyone has the right toanationality'."
Whenacountry is at the receiving end of fallout from eitherawillful persecution of the Rohingyas by the military as in 1978 and 1991 and internal ethnic violence as erupted lately, it has to defend its national interest. Bangladesh has every right to address the problem bilaterally, and if necessary, internationally. Butahands-on role is missing. What is difficult to understand is Bangladesh government treating the latest dimension to the Rohingya question inaway that it can make all the difference between good and bad bilateral relations. Why must this be so; an issue has arisen and it must be dealt with, first compassionately and then by taking it up at the government-to-government level inano nonsense manner. Now, why haveashort memory? In both times that the spates in Rohingya exodus were triggered by military operations in Myanmar, we arranged repatriation of the refugees by engaging the military authorities, post-1978 and 1991. We could work outasolution, incomplete that it might have been, albeit under the auspices of the UNHCR. Why then the latest upshot of ethnic raw nerves centering aroundacriminal act but allowed to proliferate asareligious-ethnic reprisal by the majority community under military watch should be handled like "glass with care" approach? By accident, if you like, the core issue has come to the fore, throughahaemorrhage though. And if the wound is 'band-aided' now, it would bleed again.
Inasense, the international community is also playing kid glove with Myanmar authorities. The West is supersensitive to the cause of consolidating the pro-democracy and open economy gains and advancing the freedom and leadership of Aung San Suu Kyi to complete the process of Myanmar's opening to the world. So, why rock the boat?
Suu Kyi's appeal to reason, her sagacity, and persistent theme of reconciliation have inspired analogies with Nelson Mandela. This is something to draw on. One of the first Suu Kyi statements on her release from house arrest had been to call for speedy resolution of ethnic minority issues. We are looking to her to takeaconscientious role in resolving the "nationality" issue of the Rohingyas. We are heartened by her expression of concern over "the handling of the situation by local Rakhaine authorities, in particular their failure to dampen anti-Muslim sentiment. Suu also calls on Buddhists to 'have sympathy for minorities'." (Xinhua)
Suu Kyi's growing international image is of value to the military who still retain the levers of power but understands the efficacy of withdrawal of sanctions on and investment in Myanmar. Pragmatism suggests they should swim with the current.
The two foregoing factors taken together, condition in Myanmar couldn't have been potentially more conducive than it is today towards settling all the ethnic minority issues that bristle the Myanmar body-politic.
There isathird element that the Myanmar government needs to consider to reshape its policy towards the Rohingyas. Ethnic groups like the Karen and Kachin are "insurrectionist" espousing the aspirations of small nations. While attempts are made to assimilate them into the Myanmar society, why should the innocent, armless Rohingyas be left behind? The writer is Associate Editor, The Daily Star. source here
Arakan Riot News Update : June 28, 2012
Police arrests with various forms in Maungdaw.
Maungdaw, Arakan State: Burmese border security force (Nasaka) has been going to check the family lists of Rohingya today morning, according to village administration office member from Maungdaw.
The Nasaka has been starting to check the family list of Ward number2and4where the Nasaka checked the lists with family members and if anyone fail to show on the time of checking, he/she was eased from the list. If every member is present at the time of checking, the authority issuedacard masked “Checked”But, in Kyikanpyin and Nwahyondaung village, Nasaka has been checking the family lists but Nasaka has been taking signature from the family head onablank paper after checked the list.
Egypt activists to protest at Myanmar embassy over Rohingya attacks
Manar Ammar | 28 June 2012 | Western Myanmar’s Rohingya Muslims face food shortages and ethnic violence.
CAIRO: Egyptian rights activists announced their solidarity with the under attack Muslim Rohingya community in Arakan, Myanmar, and plan to protest outside the Myanmar embassy later on Thursday.
“We are against exterminating peoples for their religion or beliefs,” said the invitation to action.
“The Arakan region has seen some serious human rights violations since the beginning of June where Muslims were attacked by Buddhists.”
The activists plan to gather in the upscale Cairo neighborhood of Zamalek at5PM to protest the ethnic violence outside of the embassy.
Some 30 Rohingya have been killed in violent clashes in Myanmar asaresult of ethnic violence with Buddhists in the Western area.
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တည်ငြိမ်စ ပြုပေမဲ့ စိုးရိမ် နေကြဆဲ။
မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် စခန်း
ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်းမှာ တည်ငြိမ်စ ပြုနေပြီး စစ်တွေမြို့မှာ အခြေအနေတွေ အေးဆေး နေတယ်လို့ ရခိုင် ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင် ဦးဝင်းမြိုင် က ပြောပါတယ်။ဒုက္ခသည် စခန်း တွေမှာ တွေ့ရတဲ့ မွတ်ဆလင်များစစ်တွေမြို့ ဈေးကို ပြန်ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ မွတ်ဆလင် တွေကြား ပြဿနာ တွေ ဖြစ်လာ နိုင်တာကို ကာကွယ်တဲ့ အနေနဲ့ နှစ်ဘက် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဈေးမိ ဈေးဖ တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီး မွတ်ဆလင် ဆိုင်တွေထဲက ပစ္စည်းတွေကို ဝေသာလီ ဘောလုံး ကွင်းဆီ ပြောင်းရွှေ့ ပေးခဲ့တယ်လို့ ဦးဝင်းမြိုင် က ပြောပါတယ်။
စစ်တွေနဲ့ အနီး တဝိုက် အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဖြစ်နေသူ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက် ကုလ သမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့ အစည်းတွေ နဲ့ တခြား အဖွဲ့ တွေက လာရောက် လှူဒါန်း ကြပြီး သူတို့ကို မွတ်ဆလင် ဒုက္ခသည် စခန်းတွေဆီ သွားခွင့် မပြုဘူးလို့ ပြောနေကြတာ တွေ နဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ဦးဝင်းမြိုင်က အစိုးရ အနေနဲ့ ကန့်သတ်ချက် မရှိကြောင်း ဘယ် အဖွဲ့ပဲ လာလာ သွားခွင့် ပြုထားကြောင်း ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
စစ်တွေက ရခိုင် ဒုက္ခသည်များတခါ မောင်းတော မြို့မှာ အကြမ်းဖက်မှု နောက်ပိုင်း ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေ ဘဏ် ဝန်ထမ်းတွေ မိမိတို့ နေရပ်ရင်းကို ပြန်သွား ခဲ့ကြ သလို ဒေသခံ ရခိုင် တိုင်းရင်းသား တခိျု့ဟာ စစ်တွေနဲ့ ရန်ကုန်မြို့ တို့ဆီ ပြောင်း ရွှေ့ သွားခဲ့ ကြတယ်လို့ မြို့ခံ တဦးက ပြောပါတယ်။မောင်းတောမြို့မှာ လုံခြုံရေးတွေ ချထားပြီး ကျောက်ဖြူမြို့တို့မှာ သန်းခေါင် စာရင်း လိုက်စစ် နေတယ်လို့ ဒေသခံ တွေက ဘီဘီစီ ကို ပြောပါတယ်။
ဒီလို အခြေ အနေ ရှိနေချိန် မှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပဋိ ပက္ခ တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဗြိတိန် နိုင်ငံ ပါလီမန် ရဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ ဒီမို ကရေစီ ရရှိရေး ဆိုင်ရာ ပါတီပေါင်းစုံ အဖွဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ BROUK မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ အဖွဲ့ အစည်း UK က ဦးစီးပြီး ရှင်းလင်း တင်ပြ ခဲ့ရာမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပွားအောင် အစိုးရ အဖွဲ့တွင်းက သဘောထား တင်းမာသူတွေ၊ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ RNDP တို့က အကွက်ချ လုပ်ဆောင်တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ ပါတယ်။
BROUK ဥက္ကဌ ဦးထွန်းခင်ရဲ့ အဆို အရ ပြီးခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခမှာ သေဆုံးခဲ့သူ မွတ်ဆလင် အရေ အတွက်ဟာ အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ စုစုပေါင်း သေဆုံးသူ စာရင်းထက် ပိုများတယ်လို့ ရခိုင် ဒေသတွင်း မွတ်ဆလင် တွေကို ကိုးကားပြီး ပြော ပါတယ်။RNDP ဘက်ကတော့ သူတို့ အနေနဲ့ BROUK ရဲ့ စွပ်စွဲချက်ထဲမှာ ပါသလို ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်အောင် လုပ်တယ် ဆိုတာ မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆိုသွား ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ နေထိုင်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တွေဟာ အဘက်ဘက်က စော်ကား ခံနေရတဲ့ အတွက် နစ်နာမှုတွေကို စာနာ သင့်တယ်လို့ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ဦးဦးလှစောက တုံ့ပြန် ပါတယ်။
Source : ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်း။